Fanontaniana vitsivitsy napetraka tamin’ny Faffah ny tarika ZAZANIANGARANA
Fanontaniana vitsivitsy napetraka tamin’i Faffah an'ny tarika ZAZANIANGARANA ho fanomanana ny seho zay hataony ny 10 novembra miaraka amin’ny mpanankanto LALATIANA zay karakarain’ny association ASMADA
Inona lay hatao hoe « Opéra malagasy » ?
Antsoin’ny vazaha hoe OPERA MALGACHE ny HIRAGASY satria tsy misy fomba sy endrika entiny ametrahana azy eo anivon’ny sehatra zavakanto aty europe, dia ny OPERA no hitany fa manakaiky kokoa io zavakanto Malagasy io.
Ny HIRAGASY mantsy dia ahitana zavakanto karazany 4 mitambatra : -Ny Hira, -Ny Dihy, -Ny Kabary, ary ny Mozika.
Tamin’ny andron’ny faha-Mpanjaka dia efa nisy ny Hiragasy. Ny afovoan-tany ihany no manao HIragasy fa saingy ankafizin’ny Malagasy manontolo izy io. Nisy ireo fifanakalozana maro samihafa tamin’ireo vahiny nandalo tao MADAGASIKARA. Anisan’izany ny nahatonga ny fitafiana naka loko mena, nalaina tamin’ny endrik’ireo fitafiana miaramila Anglisy. Ny Aponga-tany lasa Aponga-be. Ny Sodina lasa trompeta sy klarinety. Na dia izany aza dia tsy nampiova ny maha HIRAGASY azy izany.
Inona ny HIRAGASY : Ny HIRAGASY dia fampisehoana ankalamanjana ahitana artista maro, indraindray mihoatra ny roapolo. Sady mpihira izireo no mpikabary, mpandihy ary koa mpanao mozika.
Ny Hiragasy dia fomba iray entin’ireo mpanakanto mampita hafatra, anatra, tsikera, ary koa hafaliana ho an’ny vahoaka. Matetika dia tarika roa no mifandimby ho tsarain’ny vahoaka. Miainga amin’na lohahevitra iray ry zareo dia velabelariny iny amin’ny alalan’ny tantara majinika maro, izay nosintoniny tao amin’ireo toe-javatra misy iainan’ny vahoaka andavanandro. Toa ny resa-tokatrano ohatra, ny resaka pôlitika, resaka fitaizana, ny fivavahana, etsetra.
Ny tena talentan’izy ireo ankoatry ny efa ananany dia ny fahaizany mamadika ireo tantara mety handratra ny olona ho lasa hatsikana.
Ny fampisehoana HIRAGASY iray dia mizara 5, izay ny voalohany dia ny antsoina hoe SASIN-TEHAKA : Entina hisarihana ny maso sy ny sofin’ny vahoaka hifantoka. Faha-2 dia ny LOHAHIRA : hira fiarahabana sy fanolorana ny loha-hevitra. Faha-3 ny RENIHIRA, izay misy ireo tantara maro isankarazany hanohanany ny lohahevitra narosony. Faha-4, ny DIHIN-DAHY, dihin’olon-tokana na olon-droa entina hampisehoana ny talenta mampiavaka ny tarika. Ary ny farany dia ny ZANAKIRA izay entiny ampisehoana ireo vakodrazana Malagasy. Ireo rehetra ireo dia elanelanin’ny Kabary hatrany
Am 10 novembra zao dia hanao fampisehona ianareo tarika Zazaniangarana. Inona no hitan’ny mpijery amin’io fotoana io ?
Ny vontoatin’ny HIRAGASY dia mitovy daholo n’inon’inona endrika isehoany. Na tany am-piandohany, izay olon-tokana no nanao azy ka niova tsikelikely lasa olona maro, dia tsy niala tamin’ny rafitra nisy azy ny HIRAGASY.
Ka izahay koa dia io rafitra io no entinay aseho sy hajaina. Endrika HIRAGASY an-tsehatra no itondranay azy fa tsy endrika mahazatra fanao ankalamanjana, izay manao boribory. 7 izahay no eny an-tsehatra. Ny loha-hevitra entinay dia ny hoe : « Tsy izay rehetra mena akory dia masaka avokoa ». Mifandraika amin’ny ohabolana vazaha manao hoe : « L’habit ne fait pas le moine ». Ny mampiavaka azy kely dia ny fisian’ny dikanteny frantsay alefa eny amin’ny rindrina. Dikateny izay niangalian’i akademisianina Malagasy, Henri RAHAINGOSON, izay efa maty, ka tsaroanay manokana sy isaoranay koa.
Mpanakanto monina eto frantsa avokoa ny ao amin’i ZAZANIANGARANA . Anisan’izany i Emeline, zanak’i RAMILISAON Besigara, izay araraotinay eto ny fisaorana ny tarika RAMILISON izay nampindrana tantara ho lalaovinay. Ny zandriny indrindra aminay dia i Rok, izay ankizy 14 taona, Mpandihy Gasy, teraka sy miaina aty Frantsa.
Opéra malagasy aty an-dafy, tsy fahita izany ! manao ahoana ny fikarakarana ?
Tsy dia misy firy tokoa satria mila fanomanana be izy io. Iaraha-mahalala fa tsy toa ny any Madagasikara ny fiainanan’ny mpanakanto aty ka ho afaka mihaona isan’andro hamerina miaraka. Misy amin’ireo Mpanakanton’i ZAZANIANGARANA dia avy any amin’ny faritany. Samy mianatra ny azy dia manambatra rehefa mihaona in-dray na in-droa alohan’ny fampisehoana.
Hiaraka amin’ny mpanankanto malaza LALATIANA koa ianareo amin’io 10 novembra io…
Ny ASMADA no nifidy anay ireo hifampizara sehatra izay anisan’ny nahafaly anay tokoa satria i Lalatiana dia tena anisan’ny olona mpankafy Hiragasy tokoa. Efa nisy fotoana izy nampindrana ny feony nentinay nanolorana ny fampisehoana Hiragasy nataonay.
Amin’ity seho ity, dia i Lalatiana no hisahana ny fizarana voalohany ary ny Zazaniangarana no hiantoka ny fizarana faharoa, ary amin’ny farany dia misy fotoana kely hiarahan’izy ireo mamarana ny takariva.
Vitsy ny seho « opéra malagasy » tahaka itony eo amin’ny mpiray tanindrazana aty ampita. Misy antony manokana ve ?
Tsy ny eo anivon’ny mpiray tanindrazana ihany fa ny fisehoanay mihintsy no vitsy satria araky ny efa voalazako teo hoe tsy mora ny manangona ny Mpilalao izay matetika tsy mitovy fotoana maha afaka. Ny hiragasy anefa tsy Hiragasy raha tsy vory avokoa ny mpilalao ahafahana manaja ireo fizarana voalazako tetsy ambony ireo.
Eny aza ko dia manasa ny maro zany ho tonga maro amin’ny 10 novembra zao etsy amin'ny "167" - 167 avenue Charles de Gaulle eo Neuilly Sur Seine manomboka am 7ora sy sasany hariva.
Makasitraka an’i Faffah ny tarika ZAZANIANGARANA ny ekipa Madaplus.